मृत्यु जितेका सनम शाक्य विमान दुर्घटना बारे बताउदै, दुर्घटनाकै कुरा गर्दा गर्दै जब विमान भुईमा बजारिन पुग्यो ! – (भिडियोसहित) – Etajakhabar
मृत्यु जितेका सनम शाक्य विमान दुर्घटना बारे बताउदै, दुर्घटनाकै कुरा गर्दा गर्दै जब विमान भुईमा बजारिन पुग्यो ! – (भिडियोसहित)
हामी आ–आफू च्यापिएका ठाउँबाट उठ्न खोज्यौं, सकेनौं। त्यहीबेला सबैलाई अत्याउने गरी जहाजको पछिल्लो भागबाट धुवाँको मुस्लो उड्यो। त्यही मुस्लो पछ्याउँदै आगोको लप्का छुट्यो। आगोको लप्कासँगै जहाजलाई यात्रुको चित्कारले छोप्यो। ﻿
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २९, २०७४ समय: २०:५६:०८